Usekulungele ukuyolwela ijezi kwiBucs - Ilanga News
Home Impilo Usekulungele ukuyolwela ijezi kwiBucs
USikhakhane uthole ugqozi iPirates yelula inkontileka yakhe
MFANAFUTHI NDLOVU – ‘UJIKELEZA’
SEKULUNGELE ukuyolwela ijezi kwi-Orlando Pirates uThembela Sikhakhane oyisitobha sale kilabhu obebolekiswe kumaZulu FC kumasizini adlule.
USikhakhane odabuka oNdini, utshele ILANGA ukuthi uthole olu-khulu ugqozi lokuyolwela indawo yakhe kwiBucs emuva kokuba le kilabhu yelule inkontileka yakhe ngeminyaka emibili.
Uthi inhloso yakhe enkulu ngesizini ezayo wukungena khaxa esikwatini sePirates aphinde anqobe nayo inkomishi.
Ubekhuluma naleli phephandaba ehambele iChesterville Heroes Cup ngoMsombuluko.
Kulindeleke ukuba lesi sitobha esimandla nangokushoshela pha-mbili, sihlangane nozakwabo ejimini yeBucs namuhla ngoLwesibili eGoli ukuqala amalungiselelo esizini ezayo.
Nokho uthi uma engalinikwa ithuba elanele, ngeke aphatheke kabi uma ephinda ebolekiswa, yi-nqobo nje uma ezofika adlale lapho ezokube elibangisa khona, kwazise womele ukugijima emi-dlalweni eminingi ngesizini ezo-kwethwasa.
“Ngikholwa wukuthi noma yimuphi umdlali usayina inko-ntileka enenhloso yokudlala hhayi ukuhlala nezihlwele.
“Ngakho-ke nami yize ingikha-thaza indaba yokuthi bengingadlali njalo oSuthwini kodwa ngijabu-le ukuthi iPirates ikhombise ukungethemba yelula inkontileka yami.
“Ngiyazi ukuthi nami kumele ngizinuke amakhwapha. Kumele ngisebenze ngokuphindiwe ukuze abaqeqeshi bezochazeka ngekhono lami.
“Okwenziwe yiBucs (kokwelula inkontileka) kungenza ngikholwe wukuthi abaqeqeshi bayo bafuna ukungisebenzisa kule sizini ezoqala.
“Leli yithuba elikhulu kimina lokuyovuselela ikhono lami kwiPirates kwazise ikhombise ukunge-themba ngokunginika inkontileka ngiphuma kwiLamontville Golden Arrows,” kusho lo mdlali.
Ebuzwa ngamahlebezi okuthi kumaZulu FC ubengatholani kahle noCavin Johnson ocija uSuthu, uthe akazimisele ngokunekela izwe ngesimo abebhekene naso.
“Ebholeni kumele uma ungum-dlali ufunde ukwamukela isimo obhekene naso, hhayi ukuhlala ubalisa ngejezi.
“Kumele ufingqe imikhono uli-lwele ijezi. Phela usuke uncintisana nabadlali abaningi abahle okusuke kumele uzame ukubehlula ngamalengiso uma unikwa ithuba,” kusho uSikhakhane.
Ugcizelele ukuthi kumthokozisile ukuba yingxenye yoSuthu kwazise ufunde okuningi kuJohnson.
Previous articleKuchithwa izibhamu kothisha ezikoleni
Next articleI-sharks ingene esigabeni somkhumulajezi kwi-super rugby